Nagarik News - खोई, अर्की पारिजात?
होमपेज / नागरिक शनिबार / खोई, अर्की पारिजात?
खोई, अर्की पारिजात?	27 Apr 2013 १४ बैशाख, २०७०
कुमारी लामा	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
पुस्तकसँगको सहयात्रा लम्बिँदै जाने क्रममा एउटा पाठकमा लेखकले प्रस्तुत गरेको विषयमा मात्र नभई अन्य पक्षप्रति पनि उत्सुकता र चेतना बढ्दै जान्छ। लेखकको भाषाशैली, प्रस्तुति, विषयवस्तुको गहिराइ, समय सापेक्षता इत्यादितिर नजर घुमाउन थाल्छन्, पाठकहरू। यो स्वभाविक हो। जति धेरै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लेखकसँगको किताबी सामीप्यता बढ्यो उत्ति नै नयाँ शैली र विषयप्रतिको चाख बढ्दै जान्छ। नेपाली साहित्यमा महिलाका विषयलाई समातेर लेखिएका उत्कृष्ट आख्यान धेरै छन्, तर ती प्रायः पुरुष लेखकबाटै सिर्जित छन्।
केही लेख्ने हैसियत बनाउनका लागि लेख्नुभन्दा सयौं गुणा बढी पढ्नुपर्छ। अध्ययन र जानकारीविना कसरी लेखक बन्न सकिन्छ! एउटा पाठकको नजरबाट हेर्दा नेपाली साहित्यमा शसक्त महिला आख्यानकारको उपस्थिति कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। नेपाली साहित्य परम्पराको विविध कालखण्डमा विभिन्न प्रवृत्तिका महिला लेखक नआएका होइनन्, तर अझ केही नपुग भएको हो भन्ने लागिरहन्छ। नेपाली साहित्यमा महिलाका विषयलाई सशक्त ढंगले उठाइएको, विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगेर लेखिएको अनि खारिएको भाषाशैली र नवीन प्रस्तुतिका आख्यान कति होलान्? पारिजातको 'शिरीषको फूल' मा प्रस्तुत गम्भीर विषय, खारिएको भाषाशैली र मीठो प्रस्तुतिलाई हाम्रा महिला स्रष्टाले चिन्तन गर्न भ्याएका छन् कि छैनन्? आखिर महिला लेखक आफ्नै कुरा, आफ्नै भावना, भोगाइ, इच्छा, अनुभूति, जीवन, परिवेश र विषयलाई किन अपेक्षाकृत ढंगमा आख्यानमा उतार्न सकिरहेका छैनन्?नेपाली साहित्यमा महिलाका विषयलाई समातेर लेखिएका उत्कृष्ट आख्यान पनि छन्, तर ती प्रायः पुरुष लेखकबाटै सिर्जित छन्। धुँस्वा सायमीको 'गंकी' सम्भवतः पहिलो नेपाली आख्यान हो, जसले त्यति उदार भएर एउटी महिलाको मनोविज्ञानलाई प्रस्तुत गरेको छ। त्यस बेलाको समयअनुसारका पात्र र परिवेशको सन्दर्भमा 'गंकी' कालजयी उपन्यास हो। यसमा महिला संवेदनाको सही प्रस्तुतीकरण पाइन्छ। 'गंकी'को विषयवस्तु सय वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहनेमा कुनै शंका छैन। पुरुष लेखक भएर पनि सायमीले महिला मनोविज्ञानलाई नजिकबाट बुझेर प्रस्तुत गरेका छन्, तर खोई महिला स्रष्टाले महिलाकै विषयलाई कालजयी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको? पारिजातको प्रसंगमा उनको 'शिरीषको फूल' हरेक पठनमा उत्तिकै मीठो लाग्छ; पहिलोपटक पढ्दै गरेको अनुभूति दिलाउँछ। हरेक पढाइमा फरक बुझाइ र व्याख्यातिर लैजान सक्नु नै यस उपन्यासको खासियत हो। उनको विषय प्रसंगको मार्मिकता पूर्णरूपमा हृदयस्पर्शी छ। उनी लामो समय बाँच्नेछिन्। पक्का हो। एक्ली पारिजातले कहिलेसम्म समग्र महिला आख्यानकारहरूलाई काँधमा बोकी हिँड्ने?विश्व साहित्य अध्ययन गर्दा महिला स्रष्टाहरू धेरै कडा रूपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। अहिलेको अवस्थामात्र यस्तो होइन, शताब्दीऔं अघिदेखि नै। उनीहरूले आफ्नो विषयलाई, आफ्ना भावना, अनुभूति, भोगाइ, विद्रोहीपना सबै प्रष्ट लेखेका छन् र लेख्दै पनि छन्। अठारौं शताब्दीमा नै मेरी ह्वील्सनक्राफ्ट महिला अधिकारका विषयमा पुस्तक लेख्दै थिइन्। केट चपिनले उन्नाइसांै शताब्दीमा 'द अवेकनिङ'बाट संसारलाई चकित पार्दै थिइन्। उनको महिला विषय, सन्दर्भ, शैली, विद्रोहीपना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीका महिला लेखकहरूको सशक्त सृजनासँग त हामी लगभग जानकार नै छौ।कन्फेसनल राइटिङले विश्वमा ल्याएको उथलपुथलका साक्षी हामी नै हौ। भर्जिनिया उल्फको 'मिसेस डालावे'को स्ट्रिम अब कन्ससनेसले ल्याएको प्रस्तुतिको नवीनता र मिसेस डालावेको मनोविज्ञानसँग लेखकको सानिध्यले विश्वलाई सधैं चकित पारेकै छ। भर्जिनिया उल्फले उप्काएको प्रसंग महिलाकै विषय हो, महिलाकै भावना र अनुभूतिमाथि फरक ढंगमा लेखिएको न हो। त्यस्तै विषय र शैलीमा नवीनता भएका नेपाली महिला स्रष्टाको आख्यान कति छन्? या अझै लेख्न बाँकी नै छ? कहिलेसम्म आफ्ना भावनाहरूलाई छोपछाप गरेरै राखिरहने र पुरुष लेखकहरूलाई मात्रै मौका दिइरहने, आफ्नै विषयमा बोलिदिन, लेखिदिन? कृष्ण धरावासीले नै राधा, टँुडाल र झोलाहरू लेखिरहनु पर्ने? इजिप्सियन लेखिका नवाल एल सादवी, नाइजेरियन चिमामन्द अदिची, अइरिस एमा डोनोहु, इन्डियन अरुन्धती रोय आदिका लेखाइ, शैली र विषयसँग संसार नतमस्तक छ। सादवीको 'द नोबल', अदिचीको 'पर्पल हिविस्कस', रोयको 'द गड अफ स्मल थिङस्' सबै महिला विषयमै केन्द्रित छन्। सादवीको जस्तो बिलकुल फरक शैली, पात्र र घटनाक्रमको पृथक बुनाई किन आउन सकेको छैन नेपाली महिला आख्यानकारहरूमा? अहिलेसम्मको लेखनमा महिला आख्यानकारले यहाँको साहित्यको श्रीवृद्धिमा पुर्‍याएको योगदानलाई भुल्नु पनि हुँदैन। वानिरा गिरिको 'कैदी' सशक्त आख्यान हो; जो भाषाशैली, प्रस्तुति सबैमा उत्तिकै उत्कृष्ट छ। यो उपन्यासको विषय पूर्णरूपमा महिलामा केन्द्रित भने होइन। 'समानान्तर आकाश' लेखेर पद्मावती सिंहले नेपाली साहित्यमा महिला आख्यानकारको उपस्थितिमा अर्को योगदान गरेकी छिन्। कथामा भागिरथी श्रेष्ठ, माया ठकुरी अनि समालोचना–निबन्धमा सुधा त्रिपाठीको योगदानलाई छुटाउन मिल्दैन। जलेश्वरी श्रेष्ठको 'नियति चक्र'को विषयवस्तुलाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं। शारदा शर्माको 'ताप' उत्तिकै गहन उपन्यास हो। पछिल्लो समयमा आएको अनुपम रोशीकै 'कुमारी आमा' लाई पनि हामीले त्यत्ति हल्का रूपमा लिन सक्दैनौं। महिला स्रष्टाहरू आउँदै छन्, लेख्दै छन्, तर कहीँ कतै अझै केही छेकबार बाँकी नै छन् कि– उनीहरूले सम्पूर्णरूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसक्नुमा! महिला स्रष्टालाई लेखकका रूपमा मात्र अघि बढ्न नदिन हाम्रो समाजमा अरू धेरै पक्षहरू पनि होलान्। यस्ता पक्षलाई चिर्दै विद्रोही भएर निस्किए पनि कहिलेसम्म उनीहरूले त्यसलाई अगाडि बढाइरहलान्। कृष्ण धरावासीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए– 'नेपाली महिला सामाजिक संकोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। आफूलाई सामाजिक दबाबबाट मुक्त गर्न नसकेपछि गाह्रो हुन्छ। महिलालाई लोग्नेको मानसिक दबाब हुन्छ। कि गृहस्थी त्याग्नुपर्‍यो, ... तर लोग्नेमान्छे भने स्वास्नीको दबाब टेर्दैन।' धरावासीका कुराबाट नै धेरै बु‰न सकिन्छ। केही अदृश्य अरू दबाबका कारण हुन सक्छ, महिला स्रष्टा अझ पनि आफ्ना भोगाइ र भावनाहरू इमानदार भएर प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्। कतै न कतै, केही न केही ढाकछोप गर्नैपर्ने बाध्यता छ। बाध्यता भनौं या साहसको कमी। अहिले विश्व साहित्यमा भइरहेको दु्रत परिवर्तनलाई हाम्रा महिला स्रष्टाले आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। केही लेख्ने हैसियत बनाउनका लागि लेख्नुभन्दा सयांै गुणा बढी पढ्नुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। अध्ययन र जानकारी नै नभई कसरी लेख्ने? यहाँका स्रष्टाले कत्तिको अध्ययन गर्ने गरेका छन्? विश्व साहित्यबारे कत्तिको जानकार छन्? नेपाली साहित्य नै कत्तिको पढ्न भ्याउँछन्? आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नुमा महिलाहरूको आफ्नै अध्ययन र जानकारीको कमी त होइन? कवि गीता त्रिपाठी यसलाई स्विकार्दै नेपाली महिला स्रष्टामा केही हदसम्म अध्ययनको कमी भएको महसुस गर्छिन्। मेरो यो लेखमा नेपाली महिला स्रष्टालाई होच्याउनु या उनीहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्नु होइन। समय परिवर्तन भइसक्यो। लेख्न जरुरी छ। 'लेखाइबाहेक अरू केहीले पनि हाम्रा घाउहरू निको पार्न सक्दैनन्।' सादवीको यो भनाइ चिन्तनयोग्य छ। नेपाली महिला स्रष्टाहरू अलि साहस, अध्ययन र आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिन ढिला भइसक्यो। अझै पनि झिनामसिना कुरा र समाजको मात्रै ख्याल गर्दै आफ्ना अनुभूति र भोगाइलाई मनमै गुम्स्याएर बसिरहने हो भने पारिजातपछिको अर्को पारिजात जन्मन फेरि शताब्दीऔं लाग्न बेर छैन। Tweet Leaveacomment Message *
भोको पेटलाई धर्मको चास्नीटिस्टा र काँगडाबाट छिर्दैन अहिलेको 'साम्राज्यवाद'। बारुदी तोप–गोला पड्काउँदै नालापानी घेराउ पनि गर्दैन। बरु 'धर्म'को हतियार भिरेर सिधै विकट कन्दरातिर पस्छ। हिजो बाइबल अघि लगाएर बन्दुक भिरेको व्यापारी साम्राज्यवाद छिर्ने...	भोटभन्दा चन्दा माग्ने धेरै'धेरै जना मंसिर ४ को प्रतीक्षामा व्यग्र छन्, मलाई कहिले सकिएला जस्तो भइसक्यो,' व्यवसायी प्रदीपकुमार श्रेष्ठ चन्दा माग्नेले हैरान बनाएपछि यस्तो बताउन थालेका छन्। उनीकहाँ भोट माग्ने भन्दा पैसा माग्ने...	कलम बोक्ने जेम्स बन्ड!कहिले जर्मनी, कहिले फ्रान्स त कहिले स्विटजरल्यान्ड। उनको यात्रा देख्दा लाग्छ, उनी फिल्म दुनियाँका सबैभन्दा ग्ल्यामरस हिरो जेम्स बन्ड हुन्। जेम्सलाई झैं उनलाई पनि कहीँ जान रोकटोक छैन। अझ उनीसँग...	नजिकियो सदरमुकामम्याङलुङ– तेह्रथुमलाई कोयाखोलाले दुई भागमा विभाजन गरेको थियो। राजनीतिक भागबन्डा, सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार सबै दुईतिर थियो। कोयाखोलावारि सदरमुकामतर्फका जलजले, सिम्ले, इसिवु, सम्दु, खाम्लालुङको सम्बन्ध म्याङलुङसँग थियो।	पल्पसा क्याफे अब फ्रान्सेली भाषामाकाठमाडौं-नारायण वाग्लेको चर्चित उपन्यास ‘पल्पसा क्याफे' फ्रान्सेली भाषामा समेत अनुवाद भएको छ। शुक्रबार राजधानीको फ्रान्सेली केन्द्रमा अनुवादित पुस्तक ‘ले पल्पसा क्याफे' विमोचन गरिएको हो।	सत्ता परिक्रमामा अल्झेको संस्कृति'पण्डित ओमकारनाथजी आफ्नो एउटै गीतबाट जति प्राप्ति महशुस गराउन सक्छन्, म अनेकौं भाषणबाट पनि त्यस्तो प्राप्ति महशुस गराउन सक्दिन।' महात्मा गान्धीले शास्त्रीय गायक ओमकारनाथ ठाकुरको कलाकारितामाथि त्यस्तो उच्च भावको टिप्पणी गरेका...	घरमै खाएजस्तोसौराहामा हात्ती महोत्सव हेरेर फर्कंदै थियौं हामी। कवि भोजराज न्यौपानेले आँबुखैरेनीमा लन्च गरौं भने। मुग्लिङबाट काठमाडौंतिर सोझिनुपर्नेमा पोखरा जाने बाटोतिर पो लागियो। आँबुखैरेनी चोकबाट पाँच सय मिटर गोरखा बजार जाने...	गजलमा सुरक्षित भबिश्यगजल वर्तमानमा नेपाली युवापुस्तमाझ निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यसले नेपाली साहित्यमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थालेको छ। चितवनका सर्जकहरूमा पनि गजल निकै लोकप्रिय बन्दै गएको पाइन्छ। समग्र नेपाली गजलको...	नागरिक शनिबार	कम्प्युटरको देवत्वकरणठमेलको पुराना पुस्तक बेच्ने पसलबाट ल्याएको एउटा चाङमा पातलो म्यागेजिन भेटियो। त्यो 'स्मरण' नामक कम्प्युटर विशेषांक...	खण्डहरमा कला पछ्याउँदैदोलखा, गैरीमुदीका छविलाल श्रेष्ठ गाउँमा आएका केही कलाकारसँग मिलेर केही फरक काम गर्दै थिए। गाउँमै उपलब्ध...	जिन्दगीको ओखतीपरदेशीले बाटो नाप्यो छाप छाडेर पाउकोकोइ छौ कि औषधी गर्ने जिन्दगीका घाउकोसुदूरपश्चिममा युगौदेखि सुनिँदै आएका कतिपय...	घरभित्रै क्रान्तिशितलहर परेर बाहिर मौसम साह्रै चिसिएको छ। 'मैले लगाउन मिल्ने कपडा र जुत्ता ल्याउन नभुल्नु है...	भर्खरै...